सुर्य जी यहाँ लगायत सम्पूर्ण मित्रहरुमा विजय दशमीको उपलक्ष्यमा सुख, शान्ति र समृदीको कामना गर्दै , शुभकामना व्यक्त गर्दछु , धन्यबाद !!
चाडपर्वहरूमा यस्तै हो !। मैले पनि मेरा धेरै दशैँ र तिहारहरु बाहिरै बिताएको छु । जहाँ बस्यो त्यही रमाउनु पर्छ ।
यहाँलाई पनि धेरै धरै शुभकामना ! दशैं त गैहाल्यो, दिपावलीको है अब |
धन्यवाद, यहाहरुलाई पनि हार्दिक शुभकामना !